निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यू, ‘शक्तिको घमण्ड चढ्ला है’ :: रमा लुइँटेल :: शब्दपाटी - ShabdaPati
निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यू, ‘शक्तिको घमण्ड चढ्ला है’ जनताले माफ गर्नेवाला छैनन्
रमा लुइँटेल आइतबार, जेठ ८, २०७९
खोटाङ जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका प्रमुखलाई शुक्रबार पद गोपनीयताको शपथग्रहण गराउँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवम् जिल्ला न्यायाधीश मात्रृकाप्रसाद आचार्य । केदार मगर/रासस
घरदैलोको सरकार चुन्न मत खसालेको तेस्रो दिनको गोधुली साँझ थियो त्यो । जेठको धुपलाई मत्थर पार्न परेको पानीले शितलता महसुश गराइरहेको थियो । समाचार कक्षको चटारो केही क्षणलाई थाँती राखेर कार्यालयबाट निस्केकी थिए । अक्सर म सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न रुचाउँछु । त्यो रुचिको महत्वपूर्ण कारण हो, त्यहाँ फरक फरक आचरणका मान्छे भेट हुनु । यसलाई अझ यसो भनौँ, सार्वजनिक यातायातको यात्रा समाज बुझ्ने यात्रा पनि हो । तर त्यो दिन मैले पैदल नै हिँडेर घर पुग्ने निर्णय गरेँ । मेरो कार्यालयबाट घरसम्म आधा घण्टा हिँडे पुगिन्छ । सडकमा हिँड्दै गर्दा मनभरि अनगिन्ती कुरा खेलिरहेका थिए । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, उम्मेदवारको क्षमता, महँगो बन्दै गएको निर्वाचन, कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारको भूमिका यस्तै यस्तै । हिँड्दै गर्दा गाडामा थरिथरिका तरकारी राखेर बिक्री गरिरहेका व्यापारीको संवाद सुनेर म एकछिन टक्क अडिएँ । उनको नाम रमेश उप्रेती रहेछ । उनी मोवाइलमा गाउँका आफन्तसँग कुरा गरिरहेका थिए । भन्दै थिए, ‘गाउँमा चुनाव के भयो, जसले जितेपछि घर मुन्तिरको बाटो बनाउन लाउनुपर्छ ।’ रमेश उप्रेतीको अपेक्षा सुनिरहँदा मैले पानी जहाजको सपना देखाउने नेताहरू सम्झेँ । महामारीका बेला अभिभावक बनेर उभिनुको सट्टा कमिशन र भ्रष्टचारमा लिप्त भएको सरकारको कर्तुत एकपछि अर्को गर्दै मेरो मानसपटलमा आए ।
गाउँमा चुनाव के भयो, जसले जितेपनि घर मुन्तिरको बाटो बनाउन लाउनुपर्छ । वडावासीले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले बाटोको बनाइदिउँन्, पिउने पानी सर्वसुलभ बनाइदिउँन् भन्दै अपेक्षा राख्नु ठूलो कुरा होइन । नागरिकको नेतासँग गगनचुम्बी अपेक्षा पटक्कै छन् ।
बाध्यताले काठमाडौंमा थन्किएका उप्रेती आफ्नो भूमिको विकासप्रति चिन्तित थिए । चिन्तन गरिरहेका थिए । कंक्रिटको यो जंगलमा उनी रहरले भाँसिएका होइन्, यो सहरसँग उनको एउटै स्वार्थ छ, त्यो हो, दीर्घरोगी जीवनसंगिनीको उपचार गर्नु र छोराछोरी पढाउनु । दार्चुलामा उम्दाका अस्पताल बनेका भए उनलाई काठमाडौं ‘परदेश’ आउनुपर्ने बाध्यता के हुन्थ्यो र । तामाका मुना जस्ता कलिला छोराछोरीलाई काठमाडौं पढ्न पठाउने रहर शायद कसकोे हुन्थ्यो । बाध्यताबस आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न असमर्थ भएपनि उनी निर्वाचनप्रति निकै उत्सुक देखिन्थे । उप्रेती त एक प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन,् जसले आफ्नो नजिकको सरकारसँग ठूला अपेक्षा राखेका छैन । रमेश जस्ता धेरैले दैलोको सरकारले आफ्नो दैनिक सजिलो बनाउने काम गरोस् भन्ने चाहन्छन् । आफ्नो टोलको बाटो बनोस्, सहुलितयतमा औषधि उपचार गर्न पाइयोस्, छोराछोरी कामका लागि विदेशिन नपरोस्, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था होस््् यस्तै यस्त अपेक्षा छन् रमेशहरूको । काम मात्रै होइन, उनीहरूले जनप्रतिनिधिबाट सौहार्द व्यवहार खोजेका छन् । मिजासिलो र विनम्र व्यवहार चाहेका छन् । भोट माग्न हात जोड्दै अनुनय विनय गर्ने जनप्रतिनिधिले आफूलाई समस्या पर्दा काँध थाप्न सक्ने सामथ्र्य राखुन् भन्ने चाहन्छन् ।
यहाँ एउटा प्रसंग उल्लेख गर्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा सर्वाधिक चर्चामा रहेको पालिका काठमाडौं महानगरपालिका हो । यो पालिका चर्चामा रहनुको मुख्य कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको लोकप्रियता हो । लौरो चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा उठेका बालेन शाहप्रतिको क्रेज किन यस्तो धेरै भयो ? नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकी भद्र नेतृ सिर्जना सिंहलाई उछिनेर उनी किन एकाएक लोकप्रिय भए ? उनले किन लोकप्रिय मत पाए ? यी प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर सबै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले मस्तिष्क मन्थन गर्नु अत्यावश्यक छ । साथै राजनीतिक दलहरूका लागि समेत यी प्रश्न यक्ष प्रश्न हुन् । बालेन शाहले जित्लान वा हार्लान ? त्यो समयले पक्कै बताउँछ । तर, उनको लोकप्रियता र उनले पाएको मत राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिको लागि ठूलो झड्का हो । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा हो । यसको अर्थ बालेन शाहको लोकप्रियता मात्रै सबै कुरा होइन । तर, एउटा कुरा के निश्चित हो भने, राजनीतिक दलको एजेण्डा, कार्यान्वयन पक्ष र राजनीतिकर्मीको बोली र व्यवहारप्रति उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् । साँच्चै उनले निर्वाचन जितेर काठमाडौं महानगरको नेतृत्व गर्ने मौका पाए भए, पदमा पुगेपछि उनले गर्ने काम महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हो । प्रणाली र प्रवृत्तिलाई दोष दिएर निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका बाचा बालेनले यदि बिर्से भने उनलाई पनि जनताले माफी दिने छैनन् । गणतान्त्रिक मुलुकका मेयरले शक्तिको दुरुपयोग गरेर अलोकतान्त्रिक कदमलाई पछ्याउन खोजे भने त्यत्तिबेला अर्को आन्दोलनका लागि जनता बाध्य हुन्छन् । यो हेक्का समेत हुन जरुरी छ ।
कतिपयले यस्तो पनि भन्ने गरेका छन्—‘विना राजनीतिक दल निर्वाचन जित्न संभव छैन । जितेपनि काम गर्न सक्दैनन् ।’ यी प्रश्न गर्नेहरूले अहिलेलाई यति मात्रै बुझे पुग्छ । सार्वभौम सम्पन्न जनता नयाँ शक्तिको खोजीमा छ, जसले कामको सम्मान गरोस्, कामलाई प्राथमिकता राखोस्, जसले विकासका नयाँ मोडलहरू कार्यान्वयन गर्ने चुनौति स्वीकार गर्न सकोस् ।
जनताको मन रिजाउने व्यवहार गर्न नसक्दा, जनताको मन जित्ने काम नगर्दा, अन्य पालिकामा पनि बालेन शाहहरू जन्मन सक्छन् । ती बालेन शाहहरूको आकर्षक एजेण्डालाई समर्थन गर्न स्थानीय तह निर्वाचनका मतदाताहरू तयार हुनेछन् । पदको शक्तिले व्यक्तिमा उन्माद ल्याउन सक्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्दै सहर र गाउँको विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न सके जनताले विश्वास रहिरहला । अन्यथा जनताले माफ गर्नेवाला छैनन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ८, २०७९ १२:३४
बिहीबार, चैत १७, २०७८ हिंसाको चपेटामा नेपाल